Villa Somalia, oo war kasoo saartay shirkii maanta furmay. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Villa Somalia, oo war kasoo saartay shirkii maanta furmay.
Villa Somalia, oo war kasoo saartay shirkii maanta furmay.
Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa war kasoo saartay shir Axaddan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Warkan oo ay lagu daabacay bogga internet-ka ee Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri.